‘परिस्थिति जस्तोसुकै आओस् हामी तीन मन्त्रालय छोड्दैनौं’ – Yug Aahwan Daily
युग संवाददाता । ८ मंसिर २०७८, बुधबार १४:०० मा प्रकाशित
मन्त्री, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, कर्णाली प्रदेश
प्रदेश सरकार गठन भएको चार बर्ष भएको छ । यो अवधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा दुई वटा मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । यस प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको नागरिकको गुनासो छ । दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा हालै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पदभार सम्हालेको करिब पनि एक महिना पुग्नै लागेको छ । तर उनले हालसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यही सरकारमा बल्लतल्ल मन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीसँग हामीले कुराकानी गरेका छन् । उनको मुख्य प्राथमिकता के छन् ? खाद्यान्न अभाव भइरहने प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उनका योजना के छन् ? लगायतका विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
हामी सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा नै छलफलमा छौं । सत्ता गठबन्धनका तीन दलबिच सहमति जुट्न सकेको छैन । अहिले पनि कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा तीनबिच छलफल जारी छ ।
यद्यपि सहमति भइसकेको छैन । त्यसकारण पनि अहिले मैले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको योजनाहरु अगाडी बढाउन सकेको छैन । तत्कालका लागि मलाइ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
दलहरुबिच सहमति हुँदा भोली मैले अरु नै कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुनसक्छ । अब सरकारले पूर्णता पाएपछि मात्र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गरौँला । अहिले खासै काम शुरु गरिसकेको अवस्था छैन ।
यहाँको प्राथमिकतामा के कस्ता योजना छन् ?
अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले नयाँ योजना ल्याउने अवस्था छैन । तर पनि विनियोजित बजेटलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा ध्यान रहने छ । अहिले हामीले नयाँ बजेट ल्याउने कुरा भएन ।
भोली सरकारले विश्वासको मत लिइसकेपछि हामीलाई कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आउँछ । अहिले त हाम्रो दलिय भागबण्डाको आधारमा मन्त्रालय बाडफाड हुँने हो । त्यहीअनुसार कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सोचौला । यद्यपि हाम्रो प्राथामिकता भनेको बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरी हामी काम गर्नेछांै ।
अहिले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकोले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको क्षेत्र कृषि हो । यस क्षेत्रमा अहिले मैले यही मन्त्रालय सम्हालेको हुनाले मैले तीन वटा क्षेत्रलाई विभाजित गरेर काम गर्छु । हिमाली, पहाडी र उपत्यकामा हुने उत्पादन के हुन ? त्यसमा लगानी गरेर काम गर्छु ।
किसानलाई भत्ता र सुनको हलो दिने योजना त कार्यान्वयन होला नी ?
सुनको हलो दिने भन्नेवित्तिकै मानिसहरुले सुन्दा साँच्चिकै सुनको हलो नै दिने होकी क्या हो भनेर सोच्ने गर्दछन् । कुरो के हो भने व्यवसायिक किसान जसले, मनग्य आम्दानी गरेको छ भने उसलाई सरकारले सहयोग गर्ने भनिएको हो । यो सुनकै हलो दिए बराबर हो । सुनकै हलो दिने भन्ने कुरा होइन ।
हामीले किसानलाई व्यावसायिक बन्न रकम अभाव नहुनेगरी सहयोग गर्नु भनेकै उनीहरुले जोत्ने हलो सुन बन्नु होइन र ? त्यसैलाई सुनको हलो भनिएको हो । मानिसहरुको बुझाई साच्चिकै सुनको हलो नै दिने भयो प्रदेश सरकारले भन्ने भएको छ ।
त्यसो होइन । जहाँसम्म किसानालाई भत्ता दिने सन्दर्भमा राम्रो उत्पादन र आम्दानी गर्ने किसानलाई मात्र भत्ता दिने भनिएको हो । यो सबै किसानलाई भत्ता दिने भनिएको होइन ।
कर्णालीलाई कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिएला ?
कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनको हिसावले राम्रो छ । हामीले हाम्रै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिदा परनिर्भर हुनपुग्यौं । जसलेगर्दा यहाँ बारम्बार खाद्यन्न संकट आउने गरेको छ । यसको समाधान भनेको अब हामीले आफ्नै स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ ।
त्यसको लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । ऋणको व्यवस्था गरेको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा आलु, फापर, स्याउ लगायत उत्पादनको लागि राम्रो छ । सल्यान, दैलेख लगायतका जिल्लाहरुमा पनि उत्पादनको हिसाबले राम्रो छ । हाम्रो उत्पादनलाई महत्व दिऔं । हामी पनि यस सम्बन्धिका कार्यक्रम ल्याएर आएका छांै ।
अर्को वेरोजगारी समस्या समाधान पनि उत्पादन बढेपछि आफै समाधान हुन्छ । कृषि र पशुपालनमा ध्यान दिऔं । म युवाहरुलाई आग्रह गर्छु । हामी विदेश गएर यही काम गर्न सक्ने यहाँ किन गर्न नसक्ने ? त्यसैले प्रदेश सरकारले व्याज अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको लाभ उठाएर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । अहिले स्वदेशमै केही गर्छु भन्नेहरुको लागि त सम्भावना धेरै छ ।
अब सरकारले कहिले पूर्णत पाउँछ ?
यहाँ सबैलाई पद चाहिएको छ । सबैलाई पदमा गएर काम गर्ने लोभ हुन्छ । तपाइँलाई किन झुट बोल्ने हो र । त्यही भएर त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडी नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा अर्को परिस्थिति आउला भन्ने डर छ । पद नपाउनेले अर्को खेल खेल्न सकछन् ।
गठबन्धन भित्रको लडाइँभन्दा पनि विश्वासको मत मुख्यमन्त्रीले मंसिर १४ गते लिनुहुन्छ । त्यसपछि मंसिर १५ गते नै सरकारले पूर्णता पाउँछ ।
तपाइँहरुले मागेको मन्त्रालय कति वटा हो ?
हाम्रो हिजोको सहमति पनि छ । हामीले अहिले पनि तीनव टा मन्त्रालय नै हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले भनेको छ । किनभने अहिलेको यो परिस्थिति सिर्जना त हामीले जोखिम मोलेर नै भएको हो ।
हाम्रो एकिकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालय अनिवार्य पाउनै पर्छ । त्यसमा मुख्यमन्त्री र उहाँको दलका साथै नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक छ । हामीले पाउने छौं ।
भागबण्डा मिलाउँदा भनेको पाइएन भने के गर्नुहुन्छ ?
मैले भनिसकेँ नी । हामीलाई तीन वटा मन्त्रालय नै दिनुपर्छ । हाम्रै पार्टीका कारण अहिलेको परिस्थिति निर्माण भएको हो ।
त्यसैले हामीले तीन वटा मन्त्रालय छोड्दैनौं । जस्तोसुकै परिस्थिति आयो भने पनि हामी हाम्रो अडानमा प्रष्ट छौं । हामीले त्याग गरेकै कारण आज यो गठबन्धन र सरकार बन्ने अवस्था आएको हो । हामीले चाहेअनुसार नै हुनेछ ।